China Lady Cross Vamp Atụrụ atụrụ slịpas factory na suppliers | Yiruihe
Nwanyị Cross Vamp Atụrụ atụrụ
Vamp na-eji ọdịdị obe iji mepụta, Ga-eme ka onye nwe ya nwee mmetụta dị nro, ọ na-eme ka onye nwe ya dị ọkụ n'otu oge ahụ. Enwere ike ịhọrọ agba dị iche iche.
Ma ọ bụ oyi ma ọ bụ ọkọchị, a ụzọ Cross Vamp Sheepskin Slipper bụ onyinye kasị mma i nwere ike inye onwe gị oyi a! Ma ọ bụ nrụgide na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-egweri kwa ụbọchị, mbelata nrụgide dị mkpa.
Nwanyị a na-eme ka akpịrị na-acha uhie uhie nke nwanyị a na-eme iji gbakwunye ụdị ma mee ka akpụkpọ ụkwụ dabara adaba. Ugbu a ị na-anọkwu n’ụlọ, o nwere ike ịdị gị ka ị gbanye akpụkpọ ụkwụ ị ga-eji na-eme ihe ị chọrọ ime.
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ Australia kachasị mma mee elu ọnụ na ime ahụ, nke na-eme ka ụkwụ ahụ niile dị ka a fụchiri ya na mmiri dị nro.
A maara atụrụ na-ekpo ọkụ maka ọkụ ya, ọkachasị Atụrụ nke Australia, nke na-eme ka ụkwụ gị kpoo ọkụ n'oge ọnwa oyi.
Na ajị anụ ahụ nwere ikuku ikuku dị mma, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ejiji ogologo oge agaghị ezu. Ọdịiche pụrụ iche nke oghere anaghị ekpo ọkụ ọbụlagodi n'oge ọkọchị na-ekpo ọkụ, yabụ 100% ezigbo Australian slippers Australian bụkwa nhọrọ mbụ maka ime ụlọ ntụ n'oge okpomọkụ.
Na ajị anụ dị mma na igbochi uto nje na inye nlekọta ahụike maka ezinụlọ gị.
Ihe mgbochi mgbochi na-enye gị ebe nchekwa dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi iji gbochie ọkọ na ala. Ihe mgbochi TPR na-egbochi mmiri na mgbochi na-amị ụda mgbe ị na-eje ije n'ala
Ma ị na-eyi akwa gị n’ụtụtụ, na-ebelata ụkwụ ike gwụrụ gị na mgbede, ma ọ bụ nọrọ n’ụlọ ụbọchị niile, slippers dị mma bụ akụkụ nke uwe akwa akpụkpọ ụkwụ gị. Ihe kachasị mkpa bụ na ị kwesịrị inweta ihe kachasị mma, otu slippers nke atụrụ na-enye gị ahụmịhe ndụ dị oke ọnụ.
Nke gara aga: Nwanyị Nwanyị Na-acha Tokwụ Shekwụ Atụrụ
Osote: Lady Cuff Ime ụlọ atụrụ atụrụ Slipper
Lady Sheepskin ime ụlọ slipper na oke oyibo aji cuff
Men Atụrụ atụrụ Slipper na Vulcanized ọbụ